Top mma freeware faịlụ maka Flight Simulator - Rikoooo
Mmadụ Bịa ka Rikoooo.com
Ebe ịchọta kacha mma mma freeware add-ons maka MSFS 2020, Prepar3D, FSX na FS2004. Download ọtụtụ narị add-ons na ebe nkiri n'efu na ntinye dị mfe ma welie ahụmịhe ụgbọ elu gị. Ekele dịrị ọtụtụ ndị okike gburugburu ụwa.
Featured: EA-7 Edgley Optica MSFS 2020
Featured: Zenith CH 701 STOL maka P3D Ogbogu Okonji
Nkọwa: MSFS 2020 Prepar3D v5 Prepar3D v4 Prepar3D v3 Prepar3D v2 Prepar3D v1 FSX Steam FSX FS2004 Airbus Boeing
⚡️ Na nso nso a tinye faịlụ
GREKWUO - FSX / STLỌ
Zenith CH 701 STOL maka P3D Ogbogu Okonji
Emepụtara 20 Mee 2021
emelitere 20 May 2021
Nke a bụ Zenith 701 maka P3D site na Lionheart Creations, ihe na-atọ ọchị ma na-akpali akpali "mbara igwe jeep". Ihe oru ngo nke were afọ 2 ime, site na mmekorita ya na Zenith Aircraft Corporation. Mepụta ugbu a maka n'efu.
Kevin Miller - Lionheart Anwale .lọ Ọrụ
McDonnell Douglas DC10-30 Omuma Liveries FSX & P3D
Emepụtara 16 Mee 2021
emelitere 16 May 2021
Nke a bụ McDonnell Douglas DC10-30 V3 kpochapụwo liveries 'collection. Dabere na ihe nlereanya Thomas Ruth na Eric Cantu, nke gosipụtara airfile ọhụụ agbatịkwuru na 2D / 3D Panel V3 ka mma nke edeturu ederede edegharịrị edegharị.
Philippe Marion. Dabere na ihe nlereanya Thomas Ruth na Eric Cantu
Gloster Meteor T Mk7 na F Mk8 ọdụ. Nke a bụ usoro ihe atụ zuru ezu gụnyere ọdụ ụgbọelu na ụda na-ada ụda, yana atụmatụ agba asatọ zuru ezu
Robert Richardson / Peter Watkins. Ihe osise agba site n'aka Peter Watkins
Ejiri 31 Mar 2021
emelitere 31 Mar 2021
Onyinye zuru oke nke Flanker256 nyere (nnukwu ekele gị maka ọrụ enyere). Ihe mkpọ Boeing 727-100 a nwere ụdị ụdị njem 8 na ụdị ụdị 2 nke ndị TDS / Tenkuu Developers Studio kere + nke ọdụ ụgbọ mmiri 727 nke Thomas Ruth na 32 HD dị ndụ.
Nlere ihe nlere anya: TDS (Tenkuu Developers Studio). 727 VC: Thomas Ruth. :Da: FS Audio Team. Ndụ: Juan C. Brizuela AKA Johnny. Mmegharị na ngwugwu: Flanker 256. Mmezi: Rikoooo
McDonnell Douglas F-15 Ugo CD FSX & P3D
Ezigbo McDonnell Douglas F-15 Ugo nke C na D nke izizi IRIS mepụtara wee gbanwee ka ọ bụrụ nwa afọ FSX Ọkpụkpọ site na "ignoti et quasi occulti". Na akpaka afterburner mmetụta kwukwara site Rikoooo.
Modeldị mbụ nke Iris Simulationss. FSX ntughari nke ala site na igoti et quasi occulti. Nke Rikoooo deziri
Ọdụ ụgbọ elu Sulaymaniyah International (ORSU) Iraq 2021 FSX & P3D
Ejiri 26 Mar 2021
emelitere 27 Mar 2021
Nke a bụ ọhụụ ọhụụ ọhụụ nke Sulaymaniyahen International Airport na Iraq, ị kwesịrị ịma na ọdụ ụgbọ elu a adịghịdị na FSX / P3D nchekwa data. Ọ bụ ezigbo mara mma ma zuru ezu foto-ezigbo mma-ịghọta na Freeware site Pro Simme anwansị (MAHER SOURITI).
Ngosiputa PRO © 2020. Maka Microsoft Flight Simulator & Prepar3D FSX-P3D Addons. Mmepụta & Mmebe site: MAHER SOURITI. E.mail: [email protected]
de Havilland Canada DHC-7 12 Liveries ngwugwu FSX & P3D
Ejiri 18 Mar 2021
emelitere 25 Mar 2021
Ihe ngwugwu a nwere ihe oriri iri na abụọ nke Stephen Browning kere. Na-agụnyekwa ụlọ igbe mkpuchi nwere ụlọ 12D zuru ezu, panel 3D, gauges na ụda olu. Ihe omuma ndi obodo maka FSX dakọtara Prepar3D v4 na v5.
Onye Philippe Wallaert gbakwunyere na ngalaba ọrụ ahụ. Tụlee ndepụta nke Werner Schott. Ihe nlere site na Milton Shupe, Mike Kelly, George Arana na Sim-Outhouse. FSX ngbanwe nke ala site na Eagle Rotorcraft Simulations. Niile ederede site na stephen browning.
Packorde akụkọ ihe mere eme v2 FSX & P3D
Ejiri 17 Mar 2021
ngwugwu ya gụnyere akwụkwọ akụkọ ihe mere eme niile sitere na 1971 ruo 2003, ya bụ, ndepụta 15 zuru ezu. Nnukwu ihe ọhụụ nke ngwugwu a bụ mgbakwunye nke otu ọhụụ zuru oke ma bụrụ nke ezi uche dị na ya na 100% ọhụụ ọhụụ na ọdụ ụgbọ elu mebere na 2D Panel.
Craftgbọ elu ụgbọ elu: Libardo Guzman Garcia. Native FSX/P3D ntughari site na Rikoooo. FSX/P3D Concorde Panel nke Gavin Munro. Ndozi site n'aka Eduardo Rocha. Adam Murphy na-ada ụda
Fokker T.5 onye ogbunigwe FSX & P3D
Ejiri 23 Feb 2021
emelitere 23 Feb 2021
Nke a bụ ezigbo nnọchite nke Fokker T.5. Ekele dịrị Daan Kaasjager maka ọrụ a magburu onwe ya. Devotiondị ofufe ahụ na ịdị uchu maka Freeware ka bụ ihe pụrụ iche.
Pipistrelle Nje Virus SW 80 FSX & P3D
Ejiri 18 Feb 2021
emelitere 18 Feb 2021
Pipistrelle Virus SW 80 bụ ULM nwere oche abụọ n'akụkụ abụọ nke ụlọ ọrụ Slovenia Pipistrel rụpụtara. Ihe nlere gosiputara na igwe 80 HP Rotax. Add-on nwalere ya FSX ma dakọtara Prepar3D v1 ka v5.
Nke a bụ Junkers 52 Tri Package nwere atọ dị iche iche dị ndụ dị adị ma bụrụ nke Stephen Browning kere (F-AZJU, 50G10, 2ZBF). Nwa afọ FSX nlereanya na dakọtara na Prepar3D v1 ka v5.
Modeldị mbụ nke O.Fischer. Ntughari Model site na Bulbbulb2. Nlekọta na cfg edezi site InDeepSchit. Ihe ngbanwe nile site n’aka Stephen Browning
Files Faịlụ ọhụrụ emelitere
Emelitere 2 Jun 2021
kere 27 May 2009
Nke a enweghị atụ add-on bụ onyinye si n'aka Thomas Ruth, a tụbara Airbus A330-200 na ụdị RR, GE na PW. N'ihi na FSX na Prepar3D.
Thomas Ruth, gbanwee site na Rikoooo
Emelitere 20 Mee 2021
kere 20 May 2021
Emelitere 16 Mee 2021
kere 16 May 2021
kere 17 Mar 2021
kere 31 Mar 2021
kere 26 Mar 2021
kere 18 Mar 2021
de Havilland Canada DHC-7 10 Liveries ngwugwu FSX & P3D
kere 16 Feb 2021
Complete ngwugwu maka FSX na Prepar3D (v1 ruo v5) nke dị ebube de Havilland Canada DHC-7 10 gụnyere 10 ọhụrụ liveries. Na-agụnyekwa ọfụfụ zuru ezu mebere ọnụ ụlọ nke 3D, panel 2D, gauges na ụda olu. Ihe omuma ndi obodo maka FSX.
Onye Philippe Wallaert kwukwara na-arụ ọrụ. Tụlee ndepụta nke Werner Schott. Ihe nlere site na Milton Shupe, Mike Kelly, George Arana na Sim-Outhouse. FSX ngbanwe nke ala site na Eagle Rotorcraft Simulations. Ọdịdị ọhụrụ ọ bụla site na stephen browning.
Obi dị m ụtọ iweta ebe a na-emepụta igbe ọhụụ ọhụụ, nnukwu igbe mkpuchi FREEWARE maka Boeing 787 dabere na MagKnight. Mana ọbụghị naanị nke ahụ, maka na ọ bụ ngwugwu zuru oke, yabụ na mgbakwunye na imepụta ọdụdụ ọhụụ ọhụụ agbakwunyere m ma tinyekwa ụdị 3D nke Boeing 787-8 / -9 / -10 GEnx.
Ọtụtụ faịlụ gosiri
52 951 4.09/5 (304 votes)
Ogo 511 MB
786 202 4.44/5 (265 votes)
Ogo 309 MB
kere 29 Apr 2010
emelitere 30 Jul 2018
Nke a bụ ụgbọ elu France France v2 maka Microsoft (R) Flight Simulator X (FSX) Nkwakọdo ọrụ 2 (SP2) ma ọ bụ ngwangwa na Lockheed Martin Prepar 3D (P3D)
Nombreux auteurs voir ndepụta zuru ezu dans le ngwugwu
90 618 3.40/5 (239 votes)
Ogo 10.46 MB
kere 10 Feb 2009
emelitere 19 Jun 2012
A mara mma Rafale na-atụ aro ebe a maka FSX ya na ederede 7 tinyere otu nke French Air Force. Na-agụnye kokpiiti nzuzo, ụda, eserese na otutu ihe ngosi dị elu.
Boeing 737-MAX8 Otutu-Livery FSX & P3D
61 240 3.82/5 (211 votes)
Ogo 207 MB
kere 21 Feb 2020
emelitere 2 Mar 2020
The Boeing 737-MAX8 afiak na Rikoooo! You dịla njikere iji efe ikuku a? Ọ bụ site na ikike nke onye okike Hiroshi Igami (TDS) ka anyị na-enye ngwugwu a kachasị mma gụnyere 41 repaints.
58 549 3.63/5 (187 votes)
Ogo 29,3 MB
kere 2 Mar 2010
emelitere 6 Jun 2012
Lee ndị amụrụ ọhụrụ site na Air France, Airbus A380 maka FSX! A ezigbo emeso iji ụgbọala na obi ụtọ na-ekwe nkwa
209 124 4.14/5 (183 votes)
Ogo 22.5 MB
kere 6 Jul 2009
emelitere 16 Feb 2018
Nke a bụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri USS Nimitz & USS Eisenhower nke ụgbọ mmiri si na ụgbọ mmiri US. Nke a bụ otu add-on akpọrọ AI (Artificial Intelligence) nke kọmputa na-achịkwa.
474 306 4.36/5 (154 votes)
Ogo 331 MB
kere 29 Jun 2011
Zuru ezu Emirates Fleet v3.0 dakọtara na FSX SP2, Mgbakwunye, FSX Ntan Steam na Prepar3D v XX. Nchịkọta na-enweghị atụ dị n'efu. Rikoooo enyela ezigbo nlebara anya na njikọta na arụmọrụ nke sistemu avionics, gụnyere idozi ọtụtụ nchinchi.
Complete ndepụta n'ime ngwugwu
718 487 3.99/5 (122 votes)
Ogo 739 MB
kere 28 Nov 2013
77 701 3.88/5 (122 votes)
Ogo 314 MB
kere 15 Jul 2020
emelitere 26 Jul 2020
Ebube Concorde nwa afọ maka FSX / P3D na ihe nile mepere emepe liveries si 1971 ruo 2003. Ọ bụ oge relive a iconic ụgbọ elu na ụgbọ elu gị simulator.
51 132 3.34/5 (118 votes)
Ogo 58.4 MB
kere 3 Oct 2019
emelitere 5 Oct 2019
Nke a bụ oge izizi na Freeware maka Prepar3D v4 (kwekọrọ ekwekọ FSX) Airbus A350-1000 nwere ndozi asatọ, kokpiiti mepere emepe na ụda omenala.
Ihe osise nke mbu site na Camil Valiquette (CamSim). Ntughari ala FSX/P3D nke Rikoooo. A330NG mebere kokpiiti na ogwe aka nke 2D nke THOMAS RUTH. Byda sitere na KelvinMckenzieFlightsim
203 684 4.08/5 (116 votes)
Ogo 62.42 MB
kere 30 Mar 2009
emelitere 18 Jan 2013
Lee, ha bụ, ndị Boeing 777-200 (Project Open Sky) a 3D nlereanya nke a obere mma! Nke a mkpọ bụ saa mbara ma na-agụnye 3D virtual kokpiiti na 2D panel + gauges ahaziri, omenala na-ada dabeere engines na ọtụtụ ndị ọzọ ịtụnanya
Files faịlụ na-enweghị isi
Ejiri 2 Jul 2010
The Аviatika-МАI-890 àjà ihe ọṅụṅụ ìhè vasatail ugbo elu na-zubere maka egwuregwu, aero njem, surveillance na patrol.
Ejiri 29 Nov 2011
Na 2005, Owen Hewitt weputara akụrụngwa ya wuru FS2004 Bell 206B JetRanger III. N'ime ọtụtụ afọ, ọ ghọrọ ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị nwere obi helikopta. Ma, olee mgbe FSX bia, ndi FS2004 gara aga ka nwere ndị ahaziri ahazi nke anaghị egosipụta nke ọma na simulator ọhụrụ ahụ. N'oge na-adịbeghị anya, Eagle Rotorcraft Simulations kpọtụụrụ Owen na-ekwe nkwa ime FSX nkwalite ala nna na ihe nlereanya ahụ. O jiri obi ọma nara onyinye ahụ ma ozugbo faịlụ ndị ahụ ruru ERS, ha ga-arụ ọrụ iji weta ntọhapụ a ma ama FSX. Ngosipụta Eagle Rotorcraft nwere mpako iweta Owen Hewitt's Bell 206B JetRanger ...
Okwu gbasara Rikoooo ...
Ndị obodo anyị na-eto kwa ụbọchị! N'ihi na ugbu a Rikoooo nwere karịa 208,810 Ndị debanyere aha!
Rikoooo na add-onndị okike na-enwe ekele maka ntụkwasị obi gị!
Anyị na-ahọrọ nbudata anyị dị ka ụkpụrụ njikwa mma anyị si dị. Anyị na-ewelite faịlụ ọ bụla maka ahụmịhe kachasị mma gị.
Na Rikoooo nwụnye dị mfe na ngwa ngwa!
N'ihi na ihe niile anyị na-ebudata nwere mbinye aka anyị nwere otu-pịa nkwụnye akpaka.
Kporie freeware nhọrọ site Rikoooo na obi ụtọ ọdịda!
Kacha ọhụrụ ụgbọ elu atụmatụ
1948 Wisconsin Central ụgbọ elu Inc: Le Wisconsin sous Flight Simulator
-Akwado anyị weebụsaịtị